Home News Ururka Al Shabaab oo sheegatay qaraxyadii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Al-Shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyadda weerar Qaraxyo loo adeegsaday oo Saakay lagu qaaday xarunta xerta ee Wadaadka lagu Magacaabo Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo ku taalla Koonfurta Magaalada Gaalkacyo.
Shabaab waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen Wadaadkii Cabdiweli oo si weyn looga yaqaano Soomaaliya, islamarkaana kusoo caan baxay koox dhalinyaro ah oo qaada digri lagu laray Music.
Shabaab waxa ay sidoo kale sheegteen in ay weerarkaasi ku dileen 11 ruux oo ilaalo u ahaa Cabdiweli.
Ciidanka Galmudug ayaa soo Afjaray weerarkii lagu qaaday Gaalkacyo, waxaana la sheegay in ay toogteen Koox hubeysan oo gashay gudaha xarunta wadaadka.
Qaraxyadda ayaa la sheegay in ay geysteen burbur xooggan oo saameyn ku yeeshay Xaafadda ay ku taallay xarunta Wadaadka.
Previous articlemaxaa kasoo kordhay qaraxyadii Magaalada Gaalkacyo
Next articleSoomaaliya oo ka qeeyb galeysa shirka dhaqaalaha badaha oo Dalka Kenya ka furmi doona
Ciidamada Maamulka Puntland oo heegan la geliyay maxay tahay sababta?
Qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradaha oo loo diiday isticmaalka wadada horumarta...